iPhone Fast Charging - Technoland Myanmar
Posted on December 3, 2018 December 7, 2018 by Technoland Editor
iPhone 8 နောက်ပိုင်း model တွေကို Fast Charging လုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ?
iPhone တွေဟာ သုံးရတာ အဆင်ပြေပေမဲ့ Android သုံးထားတဲ့ အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေ လောက် အားသွင်းရင် မမြန်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာက iPhone 7, 7+ ထွက်လာတဲ့အချိန်ထိ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ iPhone 8 နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ အားအမြန်သွင်းနိုင်တဲ့ fast charging နည်းပညာ တစ်ခုကို Apple က ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလို ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ fast charging နည်းပညာသက်သက်သာ ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ မော်ဒယ်တွေအတွက် ဘူးထဲမှာတော့ အရင် iPhone 5W (5V, 1A) adapter နဲ့ ကြိုးကိုပဲ ထည့်ပေးထားပြီး fast charging သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ adapter နဲ့ ကြိုးကို သီးသန့်ဝယ်ယူရမှာပါ။ ဖုန်းတစ်လုံးကို $1000 ကျော်ပေးရပေမဲ့ fast charge ကို နည်းပညာပဲထည့်ပေးပြီး charger လေးတောင်ထည့်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီး လူတော်တော်များများက ဝေဖန်တာကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်လို့သာ Apple ရဲ့ fast charging ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးတန်းတန်း အားသွင်းတာထက် အများကြီးပိုမြန်မှာဖြစ်ပြီး နာရီဝက်အတွင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ အားပြန်ပြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုအားသွင်းဖို့အတွက် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ USB C to lightning cable ရယ်၊ USB C Port ကို သုံးထားတဲ့ charger ရယ်ကို သပ်သပ်ထပ်ဝယ်ရမှာပါ။ Apple ရဲ့ Original ကိုပဲ သုံးမယ်ဆိုရင်
● Type C to lightning cable ကို $30,
● USB C charger (30W model အတွက်) ကို $55 ပေးရမှာပါ။
ကိုယ့်မှာ USB C ပါတဲ့ MacBook ရှိရင်တော့
● $77 တန် 61W model ဒါမှမဟုတ်
● $87 တန် 87W model ကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် MacBook အတွက်လည်း သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ iPhone တွေကို အားသွင်းဖို့ဆိုရင်တော့ 18W နဲ့တင် လုံလောက်နေပါပြီ။ အဲဒီထက် Watt ပိုများရင်လည်း ပိုပြီးမမြန်လာတော့ပါဘူး။
Apple ရဲ့ original accessory တွေကို ဈေးကြီးလို့ မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း 18W USB PD (Power Delivery) ကို အထောက်အပံ့ပေးပြီး ဈေးပိုသက်သာတဲ့ တခြား third party charger တွေကို သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ တံဆိပ်တွေကို ညွှန်းပေးရမယ်ဆိုရင် Anker နဲ့ Aukey charger တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုထဲမှာမှ Aukey က ပိုပြီးဈေးသက်သာတဲ့အတွက် ချွေတာချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။
● Fast charging ၁ ပေါက်၊ ရိုးရိုး ၂ ပေါက် ပါတဲ့ model ကို 28,000 Kyats,
● Fast charging ၁ ပေါက်၊ ရိုးရိုး ၁ ပေါက် ပါတဲ့ model ကို 28,000 Kyats,
● Fast charging ၁ ပေါက်တည်း ပါတဲ့ model ကို 24,200 Kyats နဲ့ Technoland ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
ကြိုးကတော့ original ဝယ်သုံးရင် သုံး၊ မသုံးချင်ရင် တခြား Hoco, Remax နဲ့ Rock တို့လိုမျိုး တံဆိပ်တွေက ထုတ်တဲ့ ကြိုးတွေနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Original charger နဲ့ သွင်းမယ်ဆိုရင် တစ်နာရီသွင်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အားပြန်ပြည့်တဲ့ iPhone X လိုဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ $30 လောက် ထပ်သုံးပြီး fast charging ရအောင် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
iPhone 8 နောကျပိုငျး model တှကေို Fast Charging လုပျဖို့ ဘာတှလေိုမလဲ?
iPhone တှဟော သုံးရတာ အဆငျပွပေမေဲ့ Android သုံးထားတဲ့ အမွငျ့ပိုငျးဖုနျးတှေ လောကျ အားသှငျးရငျ မမွနျဘူးဆိုတဲ့ပွဿနာက iPhone 7, 7+ ထှကျလာတဲ့အခြိနျထိ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါကိုဖွရှေငျးဖို့ iPhone 8 နောကျပိုငျးဖုနျးတှမှော အားအမွနျသှငျးနိုငျတဲ့ fast charging နညျးပညာ တဈခုကို Apple က ထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ အခုလို ထညျ့ပေးလိုကျတယျဆိုပမေဲ့ fast charging နညျးပညာသကျသကျသာ ပါဝငျလာတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ မျောဒယျတှအေတှကျ ဘူးထဲမှာတော့ အရငျ iPhone 5W (5V, 1A) adapter နဲ့ ကွိုးကိုပဲ ထညျ့ပေးထားပွီး fast charging သှငျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ adapter နဲ့ ကွိုးကို သီးသနျ့ဝယျယူရမှာပါ။ ဖုနျးတဈလုံးကို $1000 ကြျောပေးရပမေဲ့ fast charge ကို နညျးပညာပဲထညျ့ပေးပွီး charger လေးတောငျထညျ့မပေးရကောငျးလားဆိုပွီး လူတျောတျောမြားမြားက ဝဖေနျတာကိုလညျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
တကယျလို့သာ Apple ရဲ့ fast charging ကို သုံးမယျဆိုရငျ ရိုးရိုးတနျးတနျး အားသှငျးတာထကျ အမြားကွီးပိုမွနျမှာဖွဈပွီး နာရီဝကျအတှငျး ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျအထိ အားပွနျပွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုလိုအားသှငျးဖို့အတှကျ အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ USB C to lightning cable ရယျ၊ USB C Port ကို သုံးထားတဲ့ charger ရယျကို သပျသပျထပျဝယျရမှာပါ။ Apple ရဲ့ Original ကိုပဲ သုံးမယျဆိုရငျ
● USB C charger (30W model အတှကျ) ကို $55 ပေးရမှာပါ။
ကိုယျ့မှာ USB C ပါတဲ့ MacBook ရှိရငျတော့
● $77 တနျ 61W model ဒါမှမဟုတျ
● $87 တနျ 87W model ကို ဝယျမယျဆိုရငျ MacBook အတှကျလညျး သုံးလို့ရမှာဖွဈပါတယျ။ iPhone တှကေို အားသှငျးဖို့ဆိုရငျတော့ 18W နဲ့တငျ လုံလောကျနပေါပွီ။ အဲဒီထကျ Watt ပိုမြားရငျလညျး ပိုပွီးမမွနျလာတော့ပါဘူး။
Apple ရဲ့ original accessory တှကေို ဈေးကွီးလို့ မသုံးခငျြဘူးဆိုရငျလညျး 18W USB PD (Power Delivery) ကို အထောကျအပံ့ပေးပွီး ဈေးပိုသကျသာတဲ့ တခွား third party charger တှကေို သုံးလို့ရပါတယျ။ ဒီမှာ အလှယျတကူဝယျလို့ရတဲ့ တံဆိပျတှကေို ညှနျးပေးရမယျဆိုရငျ Anker နဲ့ Aukey charger တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနှဈခုထဲမှာမှ Aukey က ပိုပွီးဈေးသကျသာတဲ့အတှကျ ခြှတောခငျြတဲ့သူတှနေဲ့ ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ။
● Fast charging ၁ ပေါကျ၊ ရိုးရိုး ၂ ပေါကျ ပါတဲ့ model ကို 28,000 Kyats,
● Fast charging ၁ ပေါကျ၊ ရိုးရိုး ၁ ပေါကျ ပါတဲ့ model ကို 28,000 Kyats,
● Fast charging ၁ ပေါကျတညျး ပါတဲ့ model ကို 24,200 Kyats နဲ့ Technoland ဆိုငျခှဲတှမှော ဝယျယူလို့ရပါတယျ။
ကွိုးကတော့ original ဝယျသုံးရငျ သုံး၊ မသုံးခငျြရငျ တခွား Hoco, Remax နဲ့ Rock တို့လိုမြိုး တံဆိပျတှကေ ထုတျတဲ့ ကွိုးတှနေဲ့ အဆငျပွပေါတယျ။
Original charger နဲ့ သှငျးမယျဆိုရငျ တဈနာရီသှငျးမှ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ အားပွနျပွညျ့တဲ့ iPhone X လိုဖုနျးတှအေတှကျကတော့ $30 လောကျ ထပျသုံးပွီး fast charging ရအောငျ လုပျထားသငျ့ပါတယျ။
This entry was posted in Articles, Knowledge and tagged Apple, iPhone.